Sidee loo xukumaa nidaamka rikoorka raadinta ee Amazon?
Heerka sare ee wax soo saarka Amazon waxay la mid tahay qiimaha sare ee iibka sida ugu isticmaalayaasha isticmaalaya natiijooyinka ugu horeeya ee ay ku arkaan Amazon SERP oo ka jawaabaya iyaga oo ah tayada ugu fiican. Si aad u sameyso alaabtaada muuqaalka bogga natiijada raadinta, waxaad u baahan tahay inaad fahamto sida daraasadda daraasadda raadinta ee Amazon ee algorithm ka shaqeyso.
In this article, waxaan ka wada hadli doonaa qaar ka mid ah mabda 'hawsha aasaasiga ah ee Amazon darajo algorithm iyo bixin taxaddar gaar ah u darajo kasta. A9 ama Amazon search ranking algorithm
Sida laga soo xigtay sahan dhawaan la sameeyey PowerReviews, in ka badan 1 000, macaamiisha Mareykanka ayaa bilaabay baaritaankooda alaabta Amazon. Google wuxuu ku yimaadaa midka labaad, waxaana ku xiga goobaha ganacsiga e-ganacsiga ee caanka ah. Dadka kuwaas oo bilaaba alaabta ay ka baaraan on Amazon, sharaxaya ay doorashada ay xulashada sheyga, dib u eegis, maraakiib lacag la'aan ah, iyo heshiisyo.
Daraasadani waxay muujineysaa sida ay u awood u leedahay meheradan ganacsiga ee webka. Waxay bixisaa fursado iyo faa'idooyin badan oo loogu talagalay dukaamada. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad la dagaalanto tartamayaashaada warshadaha si aad alaabtaada uga dhigto Amazon SERP.
Si aad u noqoto tartan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida Amazon A9 algorithm u shaqeyneyso. First of all, waa in la ogaadaa in A9 gebi ahaanba ka duwan tahay Google. Marka macaamil uu raadinayo alaabta loo baahan yahay ee Amazon, natiijooyinka raadinta waxaa loo gudbiyaa habka laba tallaabo ah. Marxaladda koowaad, dadka isticmaala waxay helayaan kuwa ugu waxtarka badan ee natiijooyinka su'aalaha ee ka soo baxa liiska. Marxaladda labaad, dhammaan natiijooyinkaasi waxay ku kala duwan yihiin sida ay ugu kala muhiimsan yihiin iyo caanaha. Ujeedada ugu muhiimsan ee Amazon waa in la kordhiyo dakhliga guud ee macaamil kasta. Haddii dukaankaaga internetka uu keeno dakhliyo dheeraad ah Amazon, waxay u badan tahay inuu kuxusin doono TOP ee bogga natiijada raadinta. Amazon si joogto ah ayuu u shaqeeyaa iyada oo la tixraacayo darajada algorithm. Waqtigan xaadirka ah, waxay tixgeliyaan qodobadaas sida jawaab celinta user, falanqaynta barnaamijka, qiyaasaha ganacsiga muhiimka ah iyo heerarka waxqabadka.
Qodobbada muhiimka ah ee qiimaynta daraasadda Amazon
Isbeddelka isku dheelitirka
Cunsurrooyinka saameyn kara sicirada celinta waxaa ka mid ah dib u eegista, tayada, iyo baaxadda sawirrada iyo qiimeynta sicirka. Haddii aad jeceshahay in aad leedahay qadar beddelaad sare, waxaad u baahan tahay inaad siciradaada ku haysato tartan. Waxaa intaa dheer, waxay muhiim u tahay in ay soo saarto jawaab celin wax ku ool ah oo ku saabsan alaabtaada maaddaama ay siinayso fikradda macaamiisha mustaqbalka ee sumcaddaada caanka ah.
Cunsurka ugu horeysa ee u sheegaysa Amazon marka aad tixgelineyso boggaaga badeecada ee natiijada raadinta waa uqurux. Taasi waa sababta oo ah dhammaan alaabooyinkaagu waa inay ahaadaan kuwa ugu muhiimsan weydiinta su'aalaha. Si loo hagaajiyo arrintan, waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso hoostaada iyo sharaxaadda iyo sidoo kale liiskaaga. Dhammaan qeybahaas waxay u baahan yihiin in si fiican loo-hagaajiyo oo ay ku jiraan shuruudaha raadinta ee la raadinayey.
Ku qanacsanaanta macaamilka
. Sidaas, qarsoodi waa sahlan. Waxaad u baahan tahay inaad ku qanciso baahidaada macaamiisha, waxayna kuugu soo laaban doonaan. Dib-u-eegista wanaagsan ee aad ku soo ururiso boggaaga, fursadahaaga sare waxaad ku soo jiidi doontaa macaamiisha aad u badan ee boggaaga Source .